Arag Sawirka murugada leh ee uu Amiin Caamir ka sameeyay JUBBALAND & Madaxweynaha Kenya oo … | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Arag Sawirka murugada leh ee uu Amiin Caamir ka sameeyay JUBBALAND &...
Arag Sawirka murugada leh ee uu Amiin Caamir ka sameeyay JUBBALAND & Madaxweynaha Kenya oo …
Muqdisho (Halqaran.com) – Farshaxanistaha weyn ee Soomaaliyeed, Amiin Caamir oo ku magac dheer (Amin Arts) ayaa sawir murgo leh ka sameeyay xaaladda uu iminka ku sugan yahay maamulka Jubbaland.
Sawir-gacmeedkan ayuu ku muujiyay dhibtaada ba’an ee uu ku hayo madaxweynaha dalka Kenya, Mr. Uhuru Kenyatta.
Amin Caamira ayaa sidoo kale, farxashankan ku muujiyay madaxweyneyaashii hore ee maamul goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed, Cabdikariin Guuleed iyo Shariif Xasan Sh. Aadan oo dhawaan diyaarad ku tagay Kismaayo.
Haddaba Akhristow, maxaa kaaga baxay farshaxankan cajiibka ah ee hoos kaaga muuqda.
Amiin Caamir ka sameeyay JUBBALAND
Arag Sawirka murugada leh